गुञ्जनराज गिरी – Himalaya Television
गुञ्जनराज गिरी हिमालय टेलिभिजनमा विगत १० वर्षदेखि वरिष्ठ क्यामेरापर्सनको रुपमा कार्यरत छन् । उनी दृश्य छायांकनसँगै विविध विषयको रिपोर्टिङमा रुची राख्छन् । चूनौतीपूर्ण टेलिभिजन रिपोर्टिङमा गिरी विशेष रुची राख्छन् । टेलिभिजन पत्रकारिताका साथै उनको रुची फोटो पत्रकारितामा समेत छ ।
बाहिर झरी भित्र नाराबाजी, संसद भवन परिसरमा देखिएको दृष्य (फोटो फिचर)
प्रतिनिधिसभाको नवौं अधिवेशन आजदेखि शुरु भएको छ । बैठकमा एमालेले नाराबाजी गरेपछि पटकपटक बस्दै र स्थगित भयो । बैठकमा नाराबाजी चलिरहँदा संसद भवन बाहिरको दृष्य भने यस्तो थियो । संसद बैठक भदौ २५ गतेसम्मका लागि स्थगित भएको छ।
काठमाडौं उपत्यकामा भारी वर्षा, विभिन्न स्थानमा डुबान (फोटो फिचरसहित)
२६ असार २०७८ काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकामा आज भारी वर्षा भएको छ । करिव दुई घण्टासम्म लगातार भएको वर्षाले उपत्यकाका नदीमा सतह बढेको छ । उपत्यकाका अधिकांश सडक जलमग्न भएका छन् । नदी किनारका वस्ती जोखिममा परेका छन् ।...
चिनियाँ खोप लगाउन टेकुमा यस्तो भीड, व्यवस्थापनमा हम्मेहम्मे (फोटो फिचरसहित)
५ वैशाख २०७८ काठमाडौं । चीनबाट अनुदानमा प्राप्त खोप गत बुधबारदेखि लगाउन शुरु गरियो । यो अभियानमा नागरिकको सहभागिता उल्लेख्य छ । तर खोप केन्द्रहरु व्यवस्थित नहुँदा नागरिकलाई भने समस्या छ । खो लगाउन पुगेकाहरुको टेकुमा ठुलो भीड छ...
सरकारद्वारा लोकतन्त्रका योद्धाहरु सम्मानित (फोटो फिचरसहित)
१ वैशाख २०७८ काठमाडौं । सरकारले ३ सय ८१ जनालाई ‘लोकतन्त्र योद्धा’ सम्मान दिएको छ । २०६२–६३ को जनआन्दोलन, माओवादी सशस्त्र युद्ध र मधेस आन्दोलनमा ज्यान गुमाएकाका परिवार, घाइते तथा अपाङ्गगता भएकाहरु तथा १ सय ७६ जना बहिर्गमित पूर्वलडाकूलाई...
काठमाडौंमा मेलम्चीको पानी वितरण शुरु, कहाँ कसरी वितरण हुँदैछ पानी (फोटो फिचरसहित)
१५ चैत २०७७ काठमाडौं । काठमाडौं महाँकालचौरस्थित पुरानो पानी पोखरीबाट मेलम्चीको पानी वितरण शुरु गरिएको छ । आज काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड (केयूकेएल)का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ई. मिलन कुमार शाक्य, खानेपानी मन्त्रालयका पदाधिकारी र मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका पदाधिकारीले संयुक्त...
विभिन्न मागसहित ट्याक्सी व्यवसायी आन्दोलित (फोटो फिचर)
२४ माघ २०७७ काठमाडौं । विभिन्न मागसहित काठमाडौं उपत्यकाका ट्याक्सी ब्याबसायी आन्दोलित भएका छन् । आज आफ्ना ट्याक्सीसहित र्‍याली निकालेका व्यवसायीहरुले वैज्ञानिक भाडादर कायम गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् । यस्तै व्यवसायीहरुले बन्द हड्तालको नाममा ट्याक्सीलगायतका सार्वजनिक यातायातका साधन...
बालुवाटारमा भएको नागरिक मार्चमा बर्सियो प्रहरीको लाठी, पत्रकारसहित केही घाइते (फोटो फिचरसहित)
१२ माघ २०७७ काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनको विरोधमा निकालिएको नागरिक मार्चमा प्रहरीले लाठी चार्ज गरेको छ । काठमाडौंको कमलपोखरीमा माटोको टीका लगाएर शुरु भएको मार्चका सहभागीलाई प्रहरीले बालुवाटार नपुग्दै लाठी चार्ज र पानीको फोहोरा हानेको हो । निषेधित क्षेत्र...
तस्वीरमा हेर्नुस् नेकपा प्रचण्ड–नेपाल समूहले राजधानीमा गरेको शक्ति प्रदर्शन
९ माघ २०७७ काठमाडौं । नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी (नेकपा)को प्रचण्ड नेपाल समूहले संसद विघटन विरुद्ध काठमाडौंमा शक्ति प्रदर्शन गरेको छ । संसद पुनर्स्थापनाका लागि दबाब दिँदै प्रचण्ड–नेपाल समूहले राजधानीमा शक्ति प्रदर्शन गरेको हो । काठमाडौंका विभिन्न नौ ठाउँबाट हजारौंको...
संसद विघटनविरुद्ध नागरिकले लगाए नारा–‘समृद्धिको यात्रा, ओलीको गाइजात्रा’ (फोटो फिचरसहित)
११ पुस २०७७ काठमाडौं । नागरिक समाजका अगुवाहरुले प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक भन्दै माइतीघर मण्डलामा विरोध प्रदर्शन गरेका छन् । प्रदर्शनमा सहभागीहरुले शंख बजाएर विरोध गरेका छन् । ‘प्रतिगमनविरुद्ध बृहत नागरिक आन्दोलन’ लेखिएको ब्यानरसहित सहभागीहरुले शंख बजाउँदै संसद विघटनको विरोध...
काठमाडौंमा राजावादीको प्रदर्शन, लाग्यो ‘राजा आउ देश बचाऊ’ को नारा ( भिडियो र फोटो फिचरसहित)
१५ मंसिर, २०७७ काठमाडौं । काठमाडौंमा राजतन्त्रको पक्षमा प्रदर्शन भएको छ । सरकारले यस्ता जुलुसमा सहभागी नहुनु भनेर आग्रह गरेको अर्को दिन काठमाडौंमा राजतन्त्रको पक्षमा जुलुस निस्केको छ । राष्ट्रिय शक्ति नेपाल उपत्यका आन्दोलन परिचालन समितिको नाममा भएको प्रदर्शनका...
१२ मंसिर, २०७७ काठमाडौं । डेनमार्कमा एक जना नेपाली युवाले एकलाख डेनिस क्रोनर अर्थात् १९ लाख नेपाली रुपैयाँ छात्रवृति पुरस्कार पाएका छन्। प्रत्येक वर्ष डेनमार्कको प्रख्यात एक संस्था एपी मुलर फाउन्डेन्सले प्रशिक्षर्थीलाई प्रदान गर्ने छात्रवृत्ति यस वर्ष नेपाली युवा...
फूल खेतीः यी फूलझैं मुस्कुराउन सक्लान् यो तिहारमा किसान ? (फोटो फिचर)
२८ कात्तिक, २०७७ काठमाडौं । नेपालमा तिहारका बेला हरेक वर्ष करोडौंको फूल र फूलका माला आयात गर्ने गरिएको छ । यसरी फूल र माला विशेषगरी भारतबाट आयात गर्दा करोडौं रुपैयाँ विदेशिँदै आएको छ । तर, पछिल्लो समय नेपालमा फूल...